Archives yeNovember 2020
Vivo X51 ongororo: Gimbal runako
Iyo Vivo X51 - iyo yaidaidzwa kuti X50 Pro yekumisikidzwa kwayo kweEastern - chiitiko chikuru nekuda kwezvikonzero zvakati. Imwe, ndiyo yekutanga foni yeVivo kuvhura munzvimbo zhinji dzepasi - kuwedzera nzvimbo dzekambani nechinangwa chakakosha. Chechipiri, ine gimbal yekudzikamisa sisitimu yakavakirwa mukati mayo kamera kamera - izvo zvingangodaro zvakagadziriswa kupfuura chero imwe sisitimu iwe yauchazo… [Verenga zvakawanda ...] nezve Vivo X51 ongororo: Gimbal runako
Samsung Galaxy Book S (Intel) ongororo: Slimline yepamusoro
Nyika yemalaptop iri kuve yakaoma kunzwisisa nzvimbo kufamba. Iyi Samsung Galaxy Book S, semuenzaniso, ndiyo yechipiri chishandiso chakadai kuvhura - chete ichi chinoenderana neIntel i5 processor, nepo kuvhurwa kwepakutanga kwakavakirwa paQualcomm processor. Hapana chikuru dhiri, handiti? Zvakashata. Chishandiso cheQualcomm 8cx, kunyangwe ichipa hupenyu hukuru hwebhatiri uye LTE ye mobile… [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy Book S (Intel) ongororo: Slimline yepamusoro
Gigabyte Aorus 17X ongororo: Kubheja kune kwakanyanya
Iyo Aorus 17X yakanyanyisa kutamba mitambo - funga kutsiva desktop - zvichireva kuti inogona kuita zvese muchina wakakomba wemitambo unogona, asi zvakare unotakurika. Akanakisa emitambo malaptop: Alienware, Asus ROG, Razer, Acer Predator, HP Omen uye nezvimwe Sezvo ungangodaro wakaunganidza kubva pamutengo, iyo Aorus 17X chikara chemuchina wemitambo une simba rakakomba pasi pehodhi. Zviri… [Verenga zvakawanda ...] nezve Gigabyte Aorus 17X ongororo: Kubheja kune kwakanyanya
RedMagic 5S ongororo: Kubheja kukuru, asi avhareji yemazuva ese
Iyo Red Mashiripiti 5S inopfeka moyo wayo pasleeve yayo. Hapana mubvunzo kuti iyi foni yemitambo kuburikidza uye kuburikidza, chii neayo jazzy bhuruu uye turquoise - inozivikanwawo se'Pulse '- colourway, 144Hz yekuzorodza rate screen, fan fan kuvhura kune parutivi uye yakavakirwa-mukati kutonhora fan (iyo inoita zvishoma kurira muridzo). Haisi chishandiso chakasiyana zvakasiyana kune iyo RedMagic 5G -… [Verenga zvakawanda ...] nezve RedMagic 5S ongororo: Kubheja kukuru, asi avhareji yemazuva ese
Spotify anowana Nhau - Kuiyedza neVamwe Vakuru Vanyori
Zviri 2020 uye yega yega media media app kunze uko ine chinhu chimwe ichi chinozivikanwa seNhau. Kuva neTwitter uye LinkedIn vakasvetukira pangoro iyi, sei Spotify inogona kusiiwa kunze? Mukuvandudzwa kwechangobva kuitika, kambani yekumimhanzi mimhanzi yakatanga kuyedza yega kutora nyaya, mukubatana nevamwe vakuru vemimhanzi maartist. Spotify inotora pane nyaya yakati siyanei- Panzvimbo pe… [Verenga zvakawanda ...] nezve Spotify anowana Nhau - Kuiyedza neVamwe Vakuru Vanyori
Enda kune peji 160